Tourtiere (Sakafo Pie) - Fomba Fanamboarana
salady voankazo hawaiian miaraka amin'ny crème sourit
mijanona ary miantsena salady paty grika
vary iray masaka iray kapoaka dia mitovy amin'ny ohatr'inona tsy masaka
taco atobohy amin'ny fromazy fanosotra hen'omby sy crème marikivy
Tourtiere (Sakafo Pie)
Ity resipeo Savory Meat Pie vita an-trano ity dia lovia mamy izay azo omanina mialoha mora foana!
Namboarina tamin'ny fampiononana ovy sy tongolo rehetra, hena voatoto ary zava-manitra mafana sasany napetraka tao anaty crust flaky.
Inona no atao hoe Pie Meat?
Ny pie hena dia mety miovaova amin'ny a pie mpiandry ondry , pie voa, na 'pasty' arakaraka ny firenena nananganana azy ireo. Ity dia dikan'ny tourtiere, pie hena kanadianina vita amin'ny henan-kisoa, henan'omby na henan'omby matetika (hen'omby no ampiasako solon'ny fatotra).
Ity pie ity dia fantatra amin'ny anarana hoe “ tourtiere ”Ary ankafizin'ny taona fa ankafizinay indrindra amin'ny Krismasy! Manana zava-manitra mafana izy ao anatin'izany ny karazana spice sy jirofo izay manome ny tsirony miavaka.
HODITANY Ho an'ity fomba fahandro ity dia azonao atao ny mampiasa kofera pie roa sosona, mofomamy na a vovon-tsakafo vita an-trano .
hena Namboarina niaraka tamin'ny fitambarana henan'omby, henan-kisoa ary zava-manitra matsiro ity resipeo ity feno tsiro! Azonao atao ny manolo ny henan-kisoa amin'ny hen'omby na manolo ampahany amin'ny henan'omby amin'ny henan-kisoa fanampiny mba hanaovana an'io fomba fahandro io amin'ny zavatra azonao atao.
POTATOES Ovy nopotsehina manan-danja amin'ity fomba fahandro ity satria manampy amin'ny tsy fitoviana izy ireo ary manao ny famenoana mihazona.
Fomba fanamboarana hena
Ny fanaovana pie hena namboarina dia tsy tokony ho sarotra.
Peel ary atsipazo ovy ary apetaho amin'ny rano handrahoana. Mash.
Mandritra izany fotoana izany, volontsôkôlà ny tongolo amin'ny tongolo sy tongolo.
Ampio ny ovy sy ireo akora sisa tavela amin'ny hena ary andrahoy mandra-pahatonga azy ho matevina.
Apetaho amin'ny fofona pie ary afangaro amin'ny crust ambony, asio tombo-kase ny sisiny. Mofomamy mandra-pahatongan'ny volamena.
Aroso miaraka amina tapa- mofo tongolo lay vita an-trano ary a salady atsipy vaovao na salady voatabia voatabia ho an'ny sakafo matsiro!
Torohevitra ho an'ny hena tsara indrindra
Mba hitsitsiana fotoana dia ampiasao crème pie efa nomanina ary alao ny famenoana. Na alao ny pie iray manontolo ary atsiro (alohan'ny fanaova) aorian'izay! Avy eo manendasa araka ny torolalana.
Mba hisorohana ny vaky eo am-baravarankely, esory ny loaka ao an-tampon'ny pie mba hahafahan'ny etona mandositra.
Avelao hipetraka mandritra ny 10-15 minitra ny pie mba avela hisintona indray ny ranom-boankazo ary hihazona ilay pie hihazona tsara kokoa ny endriny rehefa voadidy sy naroso.
Ny fomba tsara indrindra itehirizana hena dia ny fitazonana azy ao anaty lovia, arofanina amin'ny foil ary tahirizo ao anaty vata fampangatsiahana.
Hiverina indray : Atsofohy amin'ny takelaka azo antoka amin'ny microwave ny ampahany iray ary apetaho mandra-pikafana.
Mangatsiaka: Sarony tanteraka izy io ary asio marika ny daty. Mofomamy avy ao anaty lafaoro hatramin'ny adiny iray sy 30 minitra na mandra-pahatongan'ny rano mangotraka ary maintso ny crust.
Resety Pie Savory
Recipe Pie an'ny mpiandry ondry - mora sy matsiro
Cheeseburger Pot Pie - cheesy fanampiny & matsiro
Pie akoho mahazatra - sakafo fampiononana tonga lafatra
Spaghetti Pie - tsara ho an'ny vahoaka
Pie Lentil Shepherd's Pie - safidy legioma matsiro
Nankafy an'ity Meat Pie ity ve ianao? Aza hadino ny mamela isa na fanehoan-kevitra etsy ambany!
Fotoana fanomanana35 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo1 ora 10 minitra Fotoana manontolo1 ora Efatra Dimy minitra Fanompoana6 silaka MpanoratraHolly Nilsson Ity pie hena mora ity dia fangaro mifangaro sy mamy izay amboarina ao anaty crust pie flaky! pirinty Pin
▢1 farantsanao henan-kisoa mahia
▢½ farantsanao henan'omby mahia
▢1 tongolo kely diced tsara
▢1 ankamaroan'ireo ovy russet voahitsaka & cubed
▢1 sotrokely sira
▢½ sotrokely sakay
▢¼ sotrokely olon-kendry
▢¼ sotrokely ravina thyme maina
▢½ sotrokely allspice
▢⅛ sotrokely jirofo
▢½ kapoaka ron-kena
▢1-2 tablespoons sombin-mofo raha ilaina
▢mofomamy ho an'ny mofomamy crust roa-inch 9-inch
Mitondrà ovy amin'ny vay ao anaty rano masira. Aharoharo 15 minitra na mandra-pahalemana. Araraka tsara ary arotsaho.
Raha mahandro ny ovy, hen'omby volontsôkôlà, henan-kisoa, tongolo ary tongolo lay mandra-paha-tsy misy mavokely mampiasa sotro handravana azy. Ampio akora sisa tavela (ao anatin'izany ny ovy nopotsehina) afa-tsy ny crème pie sy ny crumbs des mofo.
Andrahoy, ahenao ny hafanana ary apetaho mandritra ny 15 minitra na mandra-pahatongan'ny matevina. Manampia sombin-mofo 1 sotro fihinanana mba hanampiana ny fangaro hifangaro raha ilaina izany. Mangatsiatsiaka mandritra ny 20 minitra.
Mametraha lovia pie ao anaty lovia miaraka amin'ny crust ary ampio famenoana.
Ampio ny crust ambony sy ny sisin'ny tombo-kase. Manampia hantsana vitsivitsy hahafahana mandositra ny etona. Borosio miaraka amin'ny atody nokapohina raha ilaina.
Mofomamy mandritra ny 45-55 minitra na mandra-pahafatin'ny bubbly sy ny crust.
Avelao ny pie hipetraka mandritra ny 10-15 minitra hamelana ny ranom-boankazo hisintona indray ary hihazona ilay pie hihazona tsara kokoa ny endriny rehefa voadidy sy naroso.
Manompo:1silaka,Kaloria:558,Karbohidraty:36h,Proteinina:25h,Tavy:3. 4h,Tavy voky:12h,Cholesterol:79levitra,Sodium:742levitra,Potasioma:557levitra,Fibre:rOAh,Sugar:1h,Vitamina C:3levitra,Kalsioma:40levitra,Vy:4levitra
Teny lakilefomba fandrahoan-tsakafo hena mora, sakaosy hena, fomba fahandro Tourtiere Mazava ho azyBeef, Dinner, Entree, Main course masakaAmerikanina, frantsay© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .